वायुसेवा निगमले १५ वटा जहाज थप्ने «
विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व साढे ४७ अर्ब पुग्यो
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व तिर्न आनाकानी गरिहरहेको बेला सन् २०२५ सम्म थप १५ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
निगमले १० वर्षे व्यावसायिक योजना अनु?प सन् २०२५ सम्म थप १५ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । निगमको योजना अनुसार यो वर्ष अर्थात सन् २०२२ मा आन्तरिकतर्फ ३ वटा छोटो उडान र अवतरण गर्न सक्ने (इस्टोल) र २ वटा ट्रंकतर्फका जहाज खरिद गर्ने योजना छ । इस्टोल जहाजका लागि प्रतिजहाज ८६ करोड र ट्रंकका लागि प्रतिजहाज २ अर्ब लाग्ने निगमको अनुमान छ ।
आन्तरिक उडानमा विमान थपेपछि लुक्ला, पोखरा, जोमसोम र भैरहवामा उडान सेवा थप विस्तार हुने निगमले जनाएको छ । व्यावसायिक योजनाअनु?प २०२३ मा आन्तरिकतर्फ २ थान इस्टोल र ट्रंकतर्फ २ थान जहाजका साथै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २ वटा न्यारो बडीको जहाज थप्ने र सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा एउटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी थप्ने तथा २०२५ मा एउटा वाइडबडी थप्ने निगमको योजना रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा विमान थपेपछि दक्षिण कोरियाको सिओल, चीनको ग्वान्झाउ र सांघाई, श्रीलंकाको कोलम्बो, भारतको अहमदावाद, इण्डोनेसिया, जर्मनीको फ्रयांकफर्ट र अष्ट्रेलियामा उडान सु? गर्ने निगमको तयारी छ । हाल निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाजले दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, दोहा, हङकङ, क्वालाम्पुर, बैंकक, नारिता र साउदी अरेबियामा नियमित उडान सुचा? गर्दै आएको छ ।
यता, निगमले नयाँ जहाज खरिदको व्यनवसायिक योजना सार्वजनिक गरिहँदा निगमले यसअघि विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व तिर्न भने अझै सकेको छैन । निगमले दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा वाइडबडीका जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सहुलियत प्राप्त कर्जामा चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको साँवा व्याज भुक्तानीको कुल दायित्व ४७ अर्ब ४४ करोड ?पैयाँ पुगेको छ ।
निगमले २ वटा एयर बस ३२० खरिदका कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट साढे १२ अर्बका दरले २५ अर्ब ऋण लिएको थियो । २०७६ पुस अगाडिसम्म निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्दै आएपनि कोरोनापछि भने तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । यस्तै, निगमले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनासम्म ८ अर्ब ३९ करोड ?पैया आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आम्दानी ५ अर्ब ७० करोड रहेको थियो ।